Arakan Eagle: January 2009
Posted by Eagle info dash at 21:11 No comments:
ကန်ဘောင်ဘေးလမ်းထက်မှာ...လူတယောက်...ကစိုင်ကစိုင်နဲ...ကြိုးတွဲချေဝတ်ပဏာ...လျှောက်ပါလတ်တယ်ဆိုရယ်.....ကြကြွပ်ဆူ နီရယ်....နပူပြင်မှာ...ကျမွှတ်ကျွှုပ်.....အခြောက်တိစွာ.....နီနှောင်းကာလဆိုခါ....ခြီတဖတ်စိုင်းလိုက်ပင်... မြီနီ အမှူန်တိကလဲ ...ခယောင်းအတို ယှိူင်းရယ်ဘက်သို့... (သမက်တက်ပွဲ၊ ၀ါကျွှတ်ပွဲတိမှာ.....ပပေါက်ဆုတ် ၀ဲပိုင် လဲ မဟုတ်ယေ.....ဘိုင်ညာ...ဘိုင်ညာ ...နဲပြီးနီ ကတ်တယ်...တော်သလင်းတိုင်းသားတိနဲလဲမတူ....) ဘဲနဲနီပူဆာဆာမှာ.....ငစွေ...က ပိုင်ဆိုရယ်.......ယပိုင်နဲ....ကန်ဘောင်အလွန်ကို အရောက်မှာ....တခုခု နင်းမိခါ..ဂြေသီသီ...လားပဏာ..
´´´´အိုင်း´´´´ ဇာလဲချင့်...... ခချီးလား..မသိ......
ငါ ကိုင်ကြည်မယ်.....(လက်ချေနဲ...ပွတ်ကြည် ပဏာ...မွီးကြည်ရယ်လတ်)...
ွှ......အင်း... အနံ တော့...ဟုတ်လောက်တယ်....
ထ္ဓိး........ထ္ဓိး..........ထ္ဓိး..........ယော်...... ခ ချီး ရာမနား........
Posted by Eagle info dash at 17:21 No comments:
ပုံရိပ်တိ နဲ အလွမ်းရာ
ဖြည် မရ cါ့ မှာ
-ပုံရိပ်ပွင့် ဒေဌာဏ မှာ
cါမှာတစ်ယောက်
်ဇာလူရာ အပြိုက်ဆိုပါဇီ လို့
cါကိုယ်မှာ အစိုးမရ
ိုပုံ မ၀ံ သိမ့် အ ဖူး ရယ်ခါ
မိုးကြိုးခြိမ့် ထိုင်cို ခဖူးရယ်ဝါ...
cါအရူးဖြိုက်နီခါ
cါနဲမတန်
(အ၀ီးက....ထာ၀၇....သူc ယ် ချင်း တိတွက်....)
Posted by Eagle info dash at 18:33 No comments:
ချောင်းချေကြားမှာ...လောင်းချေမျော...လာရယ်ပိုင်.....လူးယင်းလူယင်း...ကြာလှအောင်....ထပါလတ်ပဏာ....."အိမ့်......ဇာလဲ...." ဆိုခါ...."အဆွီး...ပပက်ပျို...ရကာကျ.....ဇာအချိန်ရှိဗျယ်လဲ.....""ဇာအချိန်လဲပြော....""ဟိုင့်.....ဘုမယ်..ရို့ တသိုက်...ပဇွန်ခေါင်း..ဖြတ်နီလောက်ဗျယ်....ဘဒေါင်း...ရို့လဲ....တပ်ရိက္ခါအတွက်.......ဆရာလေး...ရို့...ဘမှာ.....လုပ်အားပီး....လားခဗျယ်.....နင်က...ကာလနဂါးလုတ်နီရယ်...ပေါင်တုတ်...ဆိုပဏာ....
ရာသီကုန်လွဲး၊ တပိုတွဲးသည်၊ လွမ်းဘွယ်အင်။ ။
မြူးရွင်မူ အသွယ်သွယ်၊ ရထားသဘင်၊ နှစ်တိုင်းယဉ်ကေ၊
သောင်းခွင် ရို ရပ်ပြည်ထက်။ ။
ရှေးထုံးစိုင်လာ၊ ရာဇဌာဏီ၊ မင်းနေပြည် နဲ၊ သွယ်သွယ်မြို့ ရွာ၌။ ။
ကျုံးသံရှိုက်-သိမ်သိမ်ညံ၊ သမုဒ္ဒရာ၊ ယမုံနာသည်၊ သီဒါ ဂယက်သံသို့။ ။
များရှင်လူ-ပျော်မျိုးစုံ၊ ပိန်းပေါင်းခရာ၊ စည်ဒုပ္ပာ့နယ်၊ ပတ်သာမြို့လုံးခြုံမျှ။ ။
ဟာ-၀င်ကုန်-ဆွဲးရာဆွဲး၊ လက်လှအညီ၊ ကိုယ်စီရွံကိုတွဲး၍။ ။
တချို့လဲး-ရထားဘောင်၊ လလဲဝင်းပြောင်၊ သန်းခေါင်ယံမှီး
ရင်ဘတ်တီး၍ ကြက်ကြီးတွန်လတ်ယောင်သို့။ ။
တမျက်တောင်-မယှက်ချင်၊ လာမည့်ရက်ကို ၊ တင့်နည်းရာရာဆင်၍့။ ။
တချို့လဲး- ရွှင်မြူးစံ၊ ရာသီကုန်လို့၊ နွေဦးတိုင် လတ်ပြန်သော်။ ။
ရှစ်သောင်းလွန်- လေးထောင်ခြား မြင်းမိုရ်ပတ်ရံ၊ ခုနှစ်တန်သည်
စက်ရထားနီဗိမာန်၊ ဟေမာန်ချမ်းဆောင်း၊ အလှည့်ပြောင်း၍့၊
တပေါင်းဆန်းဖိုကြံခါ၊ က- မြူးပျံ- ကျီးcုက်သောင်း၊ တောင်းချင်းယှက်ခြုံ၊
နီဆာလှူံကေ၊ ရဂုံမြိုင်- ပိတ်ပေါင်း၌။ ။
တရောင်းရောင်းဝဲလိုပျံ၊ ညှာစိမ်းဆတ်သွား၊ ပန်းစကားနယ့်၊
ကြွက်နား- ဒန့်သလွန်တည့်။ ။
မညှိုးပန်း- ချပ်တရာအဝေရာ၊ ကြက်ရုံး၊ ဂမုန်း၊ ဇီဇ၀ါနှင့်။ ။
ရွှေတုသာ- ဇော်ဂျီပန်း၊ မြတ်လေး- ကြန်ဇာ၊ ဇလတ္တာကေ
ကြိုင်အီးလွမ်း- ပင်တကာ၊ ရဂုံတောခွင်၊ မွှမ်းဖျင်ပွင့်cုံအာသည်။ ။
တပေါင်းလဆန်း လှာပြန်၏့ လေ ။ ။
Posted by Eagle info dash at 19:39 No comments:
(Khaing Ree Zan )
Posted by Eagle info dash at 20:12 No comments:
ယင်နား cါး..အ..တို...
ပိုင်စရာ တို့ကာယ် ကို
ပိုက်cါး ရီအချို မွှိလူးကာ
ဘဲဥ ဆီဆမ်း ပဏာ...
အမောင့် စိတ် စေတနာ......
သျိုက် ဦး အဆီကို
အသျှင် ပြုံးနီ ပါ.........
Posted by Eagle info dash at 19:48 No comments:
Ceremony of Dr.Saw Mra Aung (ALD) Memorial day in London
We are please inviting you to attend the ceremony of Dr.OoSaw Mra Aung memorial. Ha wasapresident of Arakan League for Democracy (ALD) and chairman of CRPP.
He become of president of ALD in 1990 and led party to achieve the support of majority of Arakamese people. ALD therefore attained 11 place in parliament after 1990 election in Burma but undermined by military regime. He was imprisoned by the regime not long after becomingchairman of CRPP in 1998 and released in 2001.He fourght for Democracy and let his party untill he pass away in 05/01/09 when he was 92 years old.We would be greatful if you can attend this memorial ceremony.
Your are sincerely,
Maung K M Zan.
On behalf of Arakanese Community (UK).
Time :06:00 - 08:00 pm
Date: 13/01/09 (Tuesday)
Place: Burmese Campaign Office Hall.
28 Charles SQ,
Near by Old Street Station.
078 0983 8241
078 5257 8366
078 6826 3321
Posted by Eagle info dash at 22:09 No comments:
Ceremony of Dr.Saw Mra Aung (ALD) Memorial day in ...